Huawei wuxuu kireystay naqshadeeye hore ee Apple | Wararka IPhone
Huawei waxay shaqaalaysiisay naqshadeeye hore ee Apple
Dhaqdhaqaaqa shaqaalaha ee shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda, marka lagu daro inay hoos yimaadaan heshiisyada sirta ee caadiga ah ee ay ku xidhan yihiin, had iyo jeer waa arrin soo jiidata dareenka, gaar ahaan haddii shaqaaluhu u wareegaan shirkad ay iska soo horjeedaan. Mid ka mid ah kuwa soo jiitay dareenka ugu badan sanadihii la soo dhaafay ayaa ahayd ka tagistii Hugo Barra ee Google kuna sii jeeday Xiaomi, isagoo noqday mid ka mid ah maamulayaasha sare ee qeybta taleefannada casriga ee shirkadda Shiinaha. Tan iyo markii ay timid, Barra waxay ku guuleysatay inay ka dhigto Xiaomi lambarka koowaad ee iibiyaha qalabka ee Shiinaha, suuqa ugu weyn ee soo saarayaasha casriga badan maanta.
Huawei, shirkadda kale ee Shiinaha, oo halkii ay ka dayan lahayd Apple, ay maamushay u noqo beddel dhab ah shirkadaha soo saara taleefannada casriga ah ee adduunka, wuxuu shaqaaleeyay Abigail Brody, oo ka mid ah nashqadeeyayaashii udub dhexaadka u ahaa muuqaalka muuqaalka muuqaalka ee isticmaalaha iPhone. Abigail ayaa mas'uul ka noqon doonta dib-u-habeynta gabi ahaanba isdhexgalka isticmaaleyaasha, lakabka qaabeynta ee ay Huawei ku dareyso taleefannadeeda oo dhan iyo in shirkadda Shiinaha ay dooneyso inay soo bandhigto moodooyinka cusub ee ay qorsheyneyso inay soo saarto ka hor dhammaadka sanadkan.
Shirkaddu waxay dooneysaa inay ka takhalusto u ekaanshaha macruufka ah ee qalabkeeda qaar astaamaha laba jibbaaran oo leh geesaha wareegsan inaad isku daydo inaad u ekaato nooc ka mid ah daahirka Android. Waxay sidoo kale sheegeysaa in midabada midab-doorsoon ee ay ku isticmaasho interface-ka EMUI ay gebi ahaanba baabi'i doonaan kuwa kale oo aad u muuqda oo soo jiidasho leh
Inkasta oo qiimaha xarumaha Huawei ee adduunka oo dhan aysan la mid ahayn Shiinaha, haddana shirkadda waxay ku guuleysatay inay cag ka dhigato suuqa adduunka iyo Hadda waa shirkadda saddexaad ee soo saarta taleefannada casriga ah ee adduunka, oo ka dambeeya Samsung iyo Apple, kuwaas oo sii wada inay xukumaan suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Huawei waxay shaqaalaysiisay naqshadeeye hore ee Apple
WhatsApp waxay ka shaqeyneysaa abuurista kooxo dadweyne, emojis ka weyn iyo wadaagida muusikada